Vokatra fanaingoana volo, fanadiovan-drivotra, fanadiovana ny fidiovana - fikitihana
Vokatra fanaingoana volo
Ireo no vokatra an-tserasera farany misy fiasa feno sy fiantohana kalitao
Mandehana-manadio 500ml fanadiovana otrikaretina
Mandehana-mikasika 750ml Toilet Cleaner
GO-mikasika 450ml Hair Mousse
Mandehana mikasika ny detergent fanasan-damba 2kg an'ny biodegradable
Niorina tamin'ny 1993
Taizhou HM BIO-TEC Co., Ltd. nanomboka ny taona 1993, miorina ao an-tanànan'i Taizhou, faritanin'i Zhejiang. Akaiky an'i Ningbo, Yiwu ary Shanghai no misy azy io, avy eo Guangzhou dia maharitra 2 ora.
Fanamarinana momba ny Go-touch: GMPC, ISO22716-2007, MSDS.
1.Detergent / cleaner, toy ny famonoana otrikaina, fanadiovan-tànana, paompy, mpanadio fidiovana (bubble manga, bubble green, bubble fotsy), mpanadio an-dakozia (ranon-tsasana fanasana lovia, mpanadio grill, mpanadio haingana be), mpanadio lamba (detergent fanasan-damba, paompy, fanamainana lamba, starching ironing), mpanadio fidiovana, mpanadio fitaratra, mpanadio savoka poleta, mpanadio karipetra sns.
2.Air fresheners, toy ny gel air freshener, aerosol air freshener, ranom-panafody manaparitaka, vakana kristaly mpanala rivotra.
Momba ny vokatray
Ny mpanamboatra rivotra dia vita amin'ny etanol, esto, rano deionaly sns. air freshener, fantatra ihany koa amin'ny hoe "ranomanitra manisy tontolo iainana", amin'izao fotoana izao no fomba mahazatra indrindra hanadiovana ny tontolo iainana sy hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra amin'ny fiara. Satria mety, mora ampiasaina ary mora ny vidiny. Mazava ho azy, azonao atao koa ny mametraka azy io amin'ny toerana tianao, toy ny trano, birao ary hotely sns…
Adress:SINAN VILLAGE, TANANA XIAOZHI, LINHAI, ZHEJIANG, CHINA.